လမ်းလျှောက်ခြင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
လူသားတစ်ဦး လမ်းလျှောက်သည့်ဖြစ်စဉ်ကို ကွန်ပျူတာဖြင့် ပုံဖော်ထားပုံ
လမ်းလျှောက်ခြင်း သည် ခြေပါသော သတ္တဝါများတွင် ရွေ့လျားမှုနှင့်ဆိုင်သည့် အပြုအမူ ဖြစ်သည်။ လမ်းလျောက်ခြင်းသည် ပြေးခြင်းနှင့် အခြားသောပုံစံများဖြင့် ခြေလှမ်းခြင်းတို့ထက် ပိုမိုနှေးသည်။
World Cup Trials in 1987 တွင် လမ်းလျှောက်ပြိုင်ပွဲဝင် အားကစားသမားများ
လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့် ပြေးခြင်းကို အမြန်နှုန်းဖြင့် ခွဲခြားနိုင်သည်။ လမ်းလျှောက်ရာတွင် အမြန်နှုန်းသည် အရပ်၊ အသက်၊ အလေးချိန်၊ မြေပြင်အနေအထား၊ မျက်နှာပြင်၊ ဝန်၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ လုံ့လ နှင့် ကျန်းမာသန်စွမ်းမှု အစရှိသည့် အချက်များပေါ် မူတည်ကာ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ လူတစ်ယောက်၏ ပျမ်းမျှလမ်းလျှောက်အမြန်နှုန်းသည် တစ်နာရီလျှင် ၃.၁ မိုင် (တစ်နာရီလျှင် ၅ ကီလိုမီတာ) ခန့် ဖြစ်သည်။ တိကျသော လေ့လာမှုများအရ ခြေကျင်လမ်းလျောက်ရာတွင် အသ်အရွယ် ကြီးသူများ၏ အမြန်နှုန်းသည် တစ်နာရီလျှင် ၄.၅၁ ကီလိုမီတာ (၂.၈၀ မိုင်/နာရီ) မှ ၄.၇၅ ကီလိုမီတာ (၂.၉၅ မိုင်/နာရီ) နှုန်းအထိ ရှိသည်။ အသက်ငယ်ရွယ်သူများသည် တစ်နာရီလျှင် ၅.၃၂ ကီလိုမီတာ (၃.၃၁မိုင်/နာရီ) မှ ၅.၄၃ ကီလိုမီတာ (၃.၃၇မိုင်/နာရီ) နှုန်းအထိ ရှိသည်။ သွက်သွက်လက်လက် လမ်းလျှောက်ပါက တစ်နာရီလျှင် ၄ မိုင် (၆.၅ ကီလိုမီတာ/နာရီ) ပတ်လည် အမြန်နှုန်း ရှိသည်။ လမ်းလျှောက်ပြိုင်ပွဲ ချန်ပီယံများ၏ အမြန်နှုန်း ပျှမ်းမျှ တစ်နာရီလျှင် ၁၄ ကီလိုမီတာ (၈.၇မိုင်/နာရီ) ထက်ပိုနိုင်သည်။
ပျှမ်းမျှလူသားကလေးငယ်တစ်ဦး၏ လမ်းလျှောက်နိုင်သည့် အရွယ်မှာ ၁၁ လသား အရွယ် ဖြစ်သည်။
ပုံမှန် သွက်သွက်လက်လက် လမ်းလျှောက်ပါက မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ရှိလာခြင်း၊ သက်လုံကောင်းလာခြင်း၊ အင်အားစွမ်းအင်များ တိုးလာခြင်း၊ ခန္ဓာကိုအလေးချိန်ကို ထိန်းသိမ်းလာနိုင်ခြင်း၊ ဘဝမျှော်မှန်းချက်များ ပိုမိုခိုင်မာလာခြင်း၊ သောက အစရှိသော စိတ်ဖိစီးမှုများကို လျှော့ချလာနိုင်ခြင်း အစရှိသော အကျိုးကျေးဇူးများစွာတို့ကို ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် နှလုံးနှင့်ဆိုင်သော ရောဂါများ၊ လေသင်တုန်းဖြတ်ခြင်း၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ အူကင်ဆာ၊ အရိုးပွရောဂါ စသည့်ရောဂါတို့ ဖြစ်ခြင်းမှ လျော့ချနိုင်သည်။[ကိုးကားချက်လိုသည်]
သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုများအရ လမ်းလျှောက်ခြင်းကြောင့် စိတိပိုင်းဆိုင်ရာများ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာခြင်း၊ မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည် မြင့်မားလာခြင်း၊ သင်ယူနိုင်စွမ်း တိုးတက်ခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်မှုကောင်းမွန်လာခြင်း၊ စိတ်ကူးစိတ်သန်း ကောင်းမွန်ခြင်း စသည့်အကျိုးကျေးဇူးများလည်း ရရှိနိုင်သည်။ တစ်နေ့လျှင် ၃၀ မိနစ်မှ ၆၀ မိနစ် ကြာအောင် တစ်ပတ်လျှင် ငါးရက် လမ်းလျှောက်ခြင်းသည် ကောင်းမွန်သည့် လမ်းလျှောက်နည်း ဖြစ်သည်။ ဤနည်းသည် နှလုံးနှင့်ပတ်သက်သည့် ရောဂါများ၊ အခြားသော ရောဂါအတော်များများ ဖြစ်ပွားနိုင်သည့် အခြေအနေတို့ကို လျော့ပါးစေနိုင်သည်။ ဥပမာအနေဖြင့် ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ချေ နဘ်းပါးလာခြင်း၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ၊ စိုးရိမ်းသောကဖြစ်ခြင်းနှင့် စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်ပွားမှုမှ ကာကွယ်လျော့ချနိုင်သည်။ လမ်းလျောက်ခြင်းဖြင့် အရိုးများကိုလည်း ကျန်းမာသန်စွမ်းစေနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် တင်ပါးဆုံရိုးတို့ကို အထူးကောင်းမွန်စေသည်။ ထို့ပြင် lowering the harmful low-density lipoprotein (LDL) ကိုလက်စထရောနှင့် raising the useful high-density lipoprotein (HDL) ကိုလက်စထရောတို့ကိုလည် ကောင်းမွန်စေသည်။ ထို့အပြင် လမ်းလျှောက်ခြင်းသည် မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းမှုနှင့် စိတ်ဖောက်ပြန်မှုများမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်ကို သုတေသနလေ့လာမှုများက တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးစင်တာသည် အမေရိကန်ရှိ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ၏ ဆီးချိုရောဂါကြောင့် သေဆုံးမှုသည် လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်မှု ရှိသည့် အချက်အလက်များကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထိုတွေ့ရှိချက်မှာ တစ်ပတ်ကို နှစ်နာရီ သို့မဟုတ် နှစ်နာရီထက်ပို၍ လမ်းလျှောက်သူ ဆီးချိုရောဂါဖြစ်ပွားသူများသည် ၃၉ ရာခိုင်နှုန်း သေဆုံးနိုင်ချေ လျော့နည်းသွားသည်။ လမ်းလျှောက်သည့် အမြန်နှုန်းသည်လည်း လူသားတို့၏ ကျန်းမာရေးအပေါ် သက်ရောက်မှု ရှိသည်။ တစ်နာရီလျှင် ၄ ကီလိုမီတာ (2.5 mph) ထက် ပိုမိုလမ်းလျှောက်ခြင်းသည် အကောင်းမွန်အသင့်တော်ဆုံး အလေ့အကျင့်ပင် ဖြစ်သည်။
အစိုးရများသည်လည်း ယခုအခါတွင် လမ်းလျှောက်ခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်မည့် ရုပ်ပိုင်းနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးကို သိရှိလာကြကာ တိုက်တွန်းအားပေးလာကြသည်။ လမ်းလျှောက်ခြင်းအပေါ် အလေးထားမှုသည် ယခုအခါ ပိုမို မြင့်တက်လာသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယခုခေတ်ကာလတွင် လူသားများသည် ရှေးယခင်ကထက် လမ်းလျှောက်မှု လျော့နည်းသွားကြသောကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။ UK ရှိ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာနတစ်ခု၏ တင်ပြချက်အရ ၁၉၉၅/၉၇ ခုနှစ် နှင့်၂၀၀၅ ခုနှစ် ကြားတွင် လမ်းလျှောက်ကာ ခရီးသွားသူ အရေအတွက်သည် ၁၆ % ကျဆင်းခဲ့သည်။ အရေအတွက်အားဖြင့် တစ်နှစ်လျှင် ၂၉၂ဦး မှ ၂၄၅ ဦးသို့ ကျဆင်းခဲ့သည်။
↑ Study Compares Older and Younger Pedestrian Walking Speeds။ TranSafety, Inc (1997-10-01)။3July 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2009-08-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Aspelin၊ Karen (2005-05-25)။ Establishing Pedestrian Walking Speeds။ Portland State University။ 2009-08-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ about.com page on walking speeds။ 2012-08-17 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Walking Age Does Not Explain Term vs. Preterm Differences in Bone Geometry" (July 2007). J Pediatr. 151 (1): 61–6, 66.e1–2. doi:10.1016/j.jpeds.2007.02.033. PMID 17586192. PMC:2031218.
↑ Boone၊ Tommy။ Benefits of Walking။ HowStuffWorks။ September 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Walking for fitness: How to trim your waistline, improve your health။ Mayo Clinic။ September 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Crawford၊ Deborah။ Why Walking is the Most-recommended Exercise။ BellaOnline။ September 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Balish၊ Chris (2006)။ How to live well without owningacar။ Ten Speed Press။ p. 134။ ISBN 1-58008-757-4။ (Google books)
Brown၊ Marie Annette; Robinson၊ Jo (2002)။ When your body gets the blues: the clinically proven program for women who feel tired and stressed and eat too much။ Rodale။ p. 82။ ISBN 1-57954-486-X။ (Google books)
Yeager၊ Selene; Doherty၊ Bridget (2000)။ The Prevention Get Thin Get Young Plan။ Rodale။ ISBN 1-57954-217-4။ (Google Books)
Edlin၊ Gordon; Golanty၊ Eric (2007)။ Health and wellness။ Jones & Bartlett Publishers။ p. 156။ ISBN 0-7637-4145-0။ (Google Books)
Tolley၊ Rodney (2003)။ Sustainable transport: planning for walking and cycling in urban environments။ Woodhead Publishing။ p. 72။ ISBN 1-85573-614-4။
↑ "Study finds path to avoiding dementia measures 14.5km"၊ Sydney Morning Herald၊ 15 October 2010။ 19 October 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "The Relationship of Walking Intensity to Total and Cause-Specific Mortality. Results from the National Walkers’ Health Study" (November 19, 2013). PLoS ONE 8: e81098. doi:10.1371/journal.pone.0081098.
↑ Statistics - Department for Transport။ Dft.gov.uk။ 11 April 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2012-08-22 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လမ်းလျှောက်ခြင်း&oldid=729121" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၁၇:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။